Muungaab: Gudoomiyihii doonta ka hara mid caaboon ayaa lagu badelayaa – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Gudoomiyaha gobolka Banaadir Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) ayaa sheegay in gudoomiyaasha 16-ka degmo ee gobolka Banaadir ay sii shaqeyn doonaan, hase ahaatee gudoomihii shaqada gudan waayo xilka laga qaadayo, islamarkaana lagu badelayo mid caaboon.
“Gudoomiyaasha 16-ka degmo wey sii shaqeyn doonaan, waxaan hadda wada saaranahay doon socota, ciddii doontaas ka harta ee shaqada kazoo bixi weysa waxaa lagu badelayaa mid caaboon” ayuu yiri gudoomiye Muungaab oo la hadlay VOA.
Dhanka kale, gudoomiye Muungaab oo wax laga weydiiyey arrimaha dhulalka ee muranka badan ka taagan yahay ee gobolka Banaadir, ayaa sheegay inuu gebi ahaanba joojiyey in la cabiro dhul cusub.
“Laga bilaabo markii la ii magacaabay xilka waxaan gebi ahaanba joojiyey in la cabiro dhul cusub, ma jiro dhul la cabiri karo ilaa amar dambe” ayuu yiri Muungaab.
Gudoomiyaasha gobolka Banaadir oo intooda badan muddo dheer xilalka haya, islamarkaana aan qaban shaqo wanaagsan iyo muranka dhulalka ayaa qeyb weyn ka ah dhibaatooyinka ka taagan caasimadda.
Taliyaha Amisom: Kama hari doono sarakiisha Alshabaab ee ka baxay degmooyinka